OsoteMapi | Lee ihe ị ga - ele anya na 2021
Nke a bụ ihe ị ga-atụ anya ya na 2021. Na 2020 ụwa gbanwere nke ọma - otu anyị si arụ ọrụ - ụzọ anyị si ebi ndụ na otu anyị si ele anya n'ọdịnihu.
Na 2020 anyị niile ga-ekwenye na anyị niile nwere nsogbu nrụgide.
Bebụ mmadụ bụ inwe nrụgide. Otú anyị si emeghachi omume ná nrụgide bụ ókè anyị na-ata ahụhụ.
Anyị enyochala puku mmadụ ole na ole kemgbe mmalite nke ọrịa a ma anyị achọpụtala ụdị nzaghachi dị iche iche dị iche iche na nrụgide nke 2020.
30% nke ndị nyochara kwuru na ọ na-amasị ha ịrụ ọrụ nke ọma na ọ na-amasị ha ịrụ ọrụ naanị ha. Anyị achọtala mmekọrịta n'etiti ụdị mmadụ nyocha na-arụ ọrụ naanị ya na-arụkwa ọrụ iche. Ha na-ahụ ya dị ka nke na-enyere ha aka ịmị mkpụrụ karịa na-enweghị nsogbu ihu na ihu.
43% nke ndị nyochara kwuru na ha na-emegharị ka ha na-arụ ọrụ ọ bụla, mana ha na-atụ uche mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke inwe ike ịga kọfị ma ọ bụ soro ndị ọrụ ibe nwee mkparịta ụka n'ọfịs. Anyị achọtala mmekọrịta dị n'etiti ụdị mmadụ na-eme nke ọma na mmadụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma nweta ume site na ịnọnyere ndị ọzọ.
27% nke ndị nyochara na-agba mbọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ha enweghị mmetụta na nchekasị. Anyị achọtala mmekọrịta n'etiti ụdị onye ọkwọ ụgbọ ala nke kachasị mma mgbe ha nwere mmetụta nke 'njikwa' nke gburugburu ebe obibi ha na eziokwu ha.
N'ime nzaghachi nyocha atọ dị n'elu ebee ka ị ga-etinye onwe gị?
Maka m, m ga - asị na m kwekọrịtara na nke abụọ nke ndị na - eme mgbanwe ma na - echekwa mmekọrịta mmekọrịta nke otu 'ndụ'.
N'oge na-adịbeghị anya n'oge isi okwu ngosi nke m na-enyefe, ajụrụ m ìgwè ahụ site na nhoputa nke ịntanetị kedu ihe ziri ezi nke ọgba aghara nke 2020 - nke a bụ akụkụ nke nzaghachi:
Manyere ụlọ ọrụ ahụ ka ha were ọrụ mebere / ọrụ ntanetị
Obere njem nke na-emetụta oge karịa n'ụbọchị
Gị na ezinụlọ ịnwekwu oge
Gị na ezinụlọ nwekwuo oge
Emepụtara ohere iji lekwasị anya na ụkpụrụ na ihe dị mkpa
Inwekwu oge iji lekwasị anya na ịbụ nke ọma
Nwepu teknụzụ iji soro mmekọrịta
Na-enwekwu njikọ na mkpokọta otu n'ime ụlọ ọrụ
Emeela ka ndị otu / m megharịa, gbanwee ma nwee ọhụụ
Eziokwu bụ na ọ bụ ezie na 2020 ga-agbada na akụkọ ntolite dịka afọ nke mgbanwe miri emi.
Ọtụtụ n'ime anyị na-aghọ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na anyị jikọtara na nkà na ụzụ anyị na anyị niile na-aga otu narị kilomita n'otu awa. Ozugbo Covid mere, ọ bụ na ọ bụrụ na 'brakes' na-agbakwunye ma anyị niile ga-eku ume ogologo ma kwusi iji tọgharịa ebe anyị na-aga na 2021.
Yabụ ugbu a anyị na-ele anya n’ọdịnihu ma lee ihe anyị ga-ele anya ya na 2021.
Anyị nwere ozi ọma na enwere ọgwụ mgbochi ugbu a na-egosi na 95% dị irè na igbochi Coronavirus. Ọ bụrụ na ọrịa ahụ a na-efe efe emeela afọ iri gara aga anyị agaraghị enwe ụdị nsogbu a ọsọ ọsọ.
Peter Diamandis ama ama-ede nke "undba ụba" ma onye nchoputa nke Mahadum Singularity na-ekwu na site na teknụzụ ọhụụ taa, ịsọ ọsọ nke ọgwụ mgbochi ahụbeghị mbụ.
Ee anyị nọ n'etiti ebili mmiri nke abụọ ma anyị ka ga-agagharị na afọ 2020 fọdụrụnụ mana enwere olileanya maka ọdịnihu dị mma site na akụkọ nke ọgwụ mgbochi.
N'oge a nke nrụgide na-adịghị ala ala, anyị ga-atụ anya mgbanwe na-atụ anya.
Ihe ndi ozo icho anya na 2021 bu ihe elebara anya nke oma. Ndị were n'ọrụ na-amata ma na-enwe mmetụta maka ọnọdụ nrụgide nke ndị ọrụ ha. N’afọ 2021, ekwere m na anyị niile ga-eleba anya n’otú anyị ga-esi bụrụ ezigbo mmadụ na otu esi enyere ndị ọzọ aka karịa ka anyị nwere na mbụ.
Ọrụ dị anya dị ebe a iji nọrọ na 2021 na gafere. Anyị na NextMapping buru amụma na 50% nke ndị ọrụ ga-arụ ọrụ nke ọma site na 2020 - anyị ebughị amụma banyere ọrịa na-efe efe! Ihe mezikwara bụ na ụlọ ọrụ dị iche iche chọpụtara na ha nwere ike ịdị mkpa na ime ime obodo na ha nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ.
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ime obodo na-ewe ihe dị ka otu awa ọrụ karịa ọrụ ha na-arụ n'ọfịs. Ọtụtụ ndị ọrụ nyochara na-ekwu na obi ha na-ama ha ikpe na ha na-arụ ọrụ nke ọma, yabụ na ha na-arụ ọrụ ogologo oge ma sie ike karịa ka ha mere na mbụ. Na mgbakwunye ndị ọrụ chọrọ ịnabata ndị were ha n'ọrụ na-arụ ọrụ ka ha wee na-arụ ọrụ ka anya na mkpa ha.
Ọrụ were hụ ọrụ dịpụrụ adịpụ dị ka ihe dị mma ebe ọ bụ na akụkọ ifo na ndị ọrụ apụtaghị na ọrụ enweghị ọrụ ọ bụla emebiela.
Nnyocha e mere Nchịkọta Ebe Ọrụ Ọrụ Mba Nile achọpụta na ndị ọrụ 80% kwenyere na ha na-arụ ọrụ n'ụlọ. Vingga n'ihu n'ihu 76% nke ndị ọrụ chọrọ ịrụ ọrụ site n'ụlọ ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị n'izu mgbe ọrịa ahụ gbusịrị.
Na 2021 anyị ga-ahụ a ebe ngwakọ ebe ọ bụla ebe ọrụ ga-enwe iwu ọrụ dịpụrụ adịpụ ebe ndị ọrụ ga-ahọrọ oge ole ha na-arụ ọrụ n'ọfịs na n'ụlọ.
Naanị 10% nke ndị ọrụ nyochara kwuru na ha na-anụ ọkụ n'obi ịlaghachi n'ọfịs ha oge niile.
Na 2021, anyị ga-ahụ mmụba nke ụlọ na-agbanwe oghere gaa n'ọfịs ndị ọzọ. Omume ala na ụlọ ugbu a n'oge ọrịa a abụwo ihe ndekọ dị elu. Anyị na-ahụ mbugharị na-agbanwe agbanwe ebe ndị mmadụ na-akwaga n'ime ime obodo na obodo ndị dịpụrụ adịpụ. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ bụrụ na anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ọ pụtara na anyị nwere ike ibi ma rụọ ọrụ ebe ọ bụla.
2021 ga - ahụ ndị nwere ike ịnyagharị amaghị ihe na enweghị ntụkwasị obi dịka ndị mmeri pụtara.
Okwu ọchụchọ 'mwakpo ụjọ' mụbara ruo 340% na Septemba 2020 site na Septemba 2019.
O doro anya na 2020 abụrụla ụjọ na-ebute afọ.
Abụ m onye nwere nchekwube dị mma ma echere m na na 2021 ihe ga-agbanye ntakịrị. Anyị ga-enwe mmetụta nke siri ike karịa ịmatakwu banyere Covid na otu esi emeso ya. Anyị ga-enwe ọgwụ mgbochi oge ụfọdụ na 2021 nke ga-enyere anyị aka inwe mmetụta nke ịchịkwa mmetụta ya.
Ọ bụrụ na enwere otu mmụta bụ isi nke siri na 2020 pụta, na anyị enweghị ikike ịchịkwa ọtụtụ ihe. N'otu oge ahụ ka enyere anyị ohere ilekwasị anya n'ihe anyị KWES controlR control ịchịkwa nke bụ echiche anyị, mmeghachi omume anyị, na omume anyị.
Otu ihe dị mkpa ị ga-ele anya na 2021 bụ na anyị mere ya site na 2020 ma yabụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme ya karịa nke m na-agwa 2021 - B BTA!